Ukuzulelwa ingqondo kukaTokyo kuchaziwe | Scrolla Izindaba
Arthur Greene noZukile Majova
Leyo nkulumo ephethe nge-emoticon ethi “Angazi”, ikhombisa ngokusobala ukuthi ingqalabutho ye-ANC uTokyo Sexwale, ulidide kanjani izwe lonke kuleli sonto – kubalwa nalabo abavame ukusekela noma yiziphi izinkulumo ezilwa noRamaphosa.
NgoLwesine, lowo abebemuthembe njengozoba ngumengameli wethule inkulumo phambi kwesithangami sabezindaba esathatha amahora amabili, esesibe ngundabamlonyeni wesizwe.
Kule nkulumo uveza ukuthi ubenalo ulwazi mayelana nengcebo enkulu emhlabeni, futhi wathi yebiwe eNingizimu Afrika.
Umbono wakhe awuqondile futhi awukhombisi umqondo ngokuphelele, kepha nasi isifinyezo:
USexwale wacelwa ngoZibandlela kowe-2018 ukuthi abe ngumuntu onegunya ngokubambisana le “White Spiritual Boy” (WSB) Trust, ebiza imali engango- $ 600 trillion.
Kubikwa ukuthi u- $ 3 trillion walesi sikhwama wawugcinwe kwi-akhawunti yase-Standard Bank eNingizimu Afrika.
Iningi le-WSB Trust belingaxhaswanga ngemali yaseNingizimu Afrika. Lesi sikhwama sise-Singapore futhi siphethwe yindoda yase-China okuthiwa nguChuck Leong.
NgoNhlolanja kowe-2019, uSexwale uthi wabhalela uNgqongqoshe Wezezimali uTito Mboweni kanye ne-South African Reserve Bank (SARB) ebazisa ngokuqokwa kwakhe njengomphathi ohlanganyelwe wesikhwama.
USexwale kanye nozakwabo kwezamabhizinisi abangashiwongo ngegama baqoqa izigidigidi zamarandi ezazitholwe emndenini ongagagulwanga ngegama.
Uthi lesi sikhwama bekuhloswe ngaso ukuthi sixhase imfundo yamahhala siphinde sisize nabampofu.
Uthe ukube lesi sikhwama asizange siphangwe, izigidi zabahlomuli besibonelelo sikahulumeni se-Covid-19 bebengathola i-R2,700 ngenyanga esikhundleni sama-R350.
Ngesikhathi ezama ukuqinisekisa ukuthi imali “ingenisiwe emnothweni”, uSexwale uthi wathola ukuthi imali yebiwe.
Uthi wabe esebhalela uMengameli uCyril Ramaphosa umyalezo ku-WhatsApp, emazisa ngalokhu kwebiwa, kodwa wangathola mpendulo.
Emiyalezweni yakhe, uthi imali eyebiwe ibibuyela eNingizimu Afrika isihlanziwe sengathi izotshalwa.
NgoMsombuluko womhla zi-19 kuMbasa, uMgcinimafa Kazwelonke waseNingizimu Afrika kanye ne-SARB bakhiphe isitatimende ngokuhlanganyela lapho bethi uSexwale uvele waba yisisulu “somkhonyovu ojwayelekile” obelokhu ukhona kusukela ngowe-2016.
USexwale usamile emazwini akhe. NgoLwesine, oKlebe bakuqinisekisile ukuthi uSexwale ubhalise isikhalazo ngezigidigidi ezilahlekile.